Puntland oo sheegtay in dad ku dhow 10 qof ay ku dhinteen roobab mahiigaan ah - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo sheegtay in dad ku dhow 10 qof ay ku dhinteen roobab mahiigaan ah
June 2, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ku dhawaad 10 qof ayaa ku geeriyootay roobab mahiigaan ah oo ka da’ay Puntland, sida ay sheegeen masuuliyiintu.
Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad oo shir jaraaid ku qabtay Garoowe maanta oo Axad ah ayaa sheegay in sagaal qof ay ku geeriyoodeen roobabka ka da’ayay gudaha Puntland labadii maalmood ee u dambeeyay.
Sidoo kale in ka badan boqol qoys oo reer guuraa ah ayaa ku xoolo waayay roobabkaas, wasiirka ayaa intaas ku daray.
Daadad ay sababeen roobabku ayaa burburiyay 17 waddo oo ay ku jirto laamiga u dhaxeeya Garoowe iyo Boosaaso, kaasoo aad muhiim ugu ah isku socodka dadka iyo dhaqaalaha deegaanada Puntland.
Meelaha ugu daran ee roobabka maahigaanka ah ay saameeyeen ayaa ah gobolada Nugaal, Karkaar iyo qeyb kamid ah Sanaag.
Dhabancad ayaa haayadaha gargaarka ka codsatay in ay si deg deg ah gurmad ula gaaraan dadka ku waxyeeloobay roobabka, kuwaasoo aan heysan cuno ku filan iyo hoy.
Waa khasaarihii ugu badnaa oo roob ka dhasha gudaha Puntland tan iyo dabayaaqadii sanadkii 2013, markaas oo roobab duufaano wata ay ku dhinteen dad ka badan 100 qof, ayna ku naf waayeen xoolo aad u badan, sidoo kalena daadad roobkaas ka dhashay uu jaray buunada Midigar ee u dhaxeysa magaalooyinka Garoowe iyo Boosaaso.
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland Deputy President Abdihakim Omar Amay said that members of Al-Shabab whom were transferred to Mogadishu, some of them escaped, and rejoined to Al-Shabab militants in southern Somalia. “Reports we are getting suggest that [...]
Mareykanka oo qaaday duqeyntiisii ugu horeysay ee Soomaaliya sanadka 2020
Muqdisho-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa qaaday duqeyntiisii ugu horeysay ee Soomaaliya ee sanadka 2020 isagoo bartilmaameedsaday maleeshiyada Al-Shabaab. Duqeynta ayaa Jimcadii ka dhacday tuulada Bacaw oo kutaala gobolka Shabeellaha Hoose, sida ay bayaan ku sheegeen taliska [...]